ငွေစု‌ဆောင်းနိုင်မည့်အပြင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် အသက်အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မိမိနှင့်အတူ မိသားစုအနာဂတ်နှင့် ကလေးများ၏ နောင်ရေးပညာရေးအတွက် စိတ်ပူပင်သောက ကင်းဝေးစေရန်နှင့် ငွေကြေးအကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အသက်အာမခံဖြစ်သည်။
Chubb အနာဂတ်မဏ္ဍိုင် အသက်အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်နှစ်ထပ်ကွမ်းရရှိမည့် အစီအစဉ်နှင့် Chubb အနာဂတ်မဏ္ဍိုင် အသက်အာမခံ အခြေခံအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည့် အစီအစဉ် စသည့် (၂) မျိုးအနက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အစီအစဉ်အားရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း
မိမိအနာဂတ်၊ မိမိ မိသားစုနောင်ရေးနှင့် သားသမီးများ၏ ပညာရေးအတွက် ငွေကြေးစုဆောင်းသည့် အလေ့အထကောင်း ရရှိစေခြင်း
ခိုင်မာသောရန်ပုံငွေထားရှိခြင်းကြောင့် ကြိုတင်မမျှော်မှန်းနိုင်သောအဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော် မိမိနှင့် မိမိ မိသားစု၏ အနာဂတ်အိပ်မက်များ ရပ်တန့်မသွားစေခြင်း
ပေးသွင်းထားရသော ပရီမီယံငွေပမာဏထက်ပိုသော အာမခံအကျိုးခံစားခွင့် ရရှိနိုင်ခြင်း
ပေးသွင်းရသော အာမခံပရီမီယံကြေးပမာဏအား ဝင်ငွေခွန်ထဲမှ ထုတ်နုတ်တွက်ချက်ရန် နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် ပေးဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေခွန် သက်သာစေခြင်း
အာမခံထားခြင်းမှရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်အား မည်သည့်အကြွေးရှင်မှ ဝရမ်းမကပ်နိုင်ခြင်း
This webpage is for general reference only and should not be regarded as professional advice, recommendation and also does not form part of the policy. It provides an overview of the key features of the product and should be read along with other materials which cover additional information about the product. Such materials include, but not limited to, product brochure that contains key product risks, policy provisions that contain the exact terms and conditions, benefit plan and other policy documents together with relevant marketing materials (if any), which are all available upon request.
You are welcome to seek independent professional advice, if needed, before buying the product.
The above information shall not be construed as an offer to sell, solicitation or persuasion to buy or provision of any of our products outside the Republic of Myanmar. For further information, please contact your Chubb Life Insurance Myanmar Agent or call our Customer Service Center Hotline at +9597500 66 908.
“Chubb Life”, “Company”, “we”, or “our” herein refers to Chubb Life Insurance Myanmar Limited.
ဤအသက်အာမခံနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားပါသလား?
ထပ်မံသိလိုသည်များ ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်